Ogo na asambodo - WELLWARES (SHIJIAZHUANG) LIMITED
Wellwares: Nrụpụta akwadoro maka nri nri seramiiki mara mma
A na-emepụta ihe nri nri seramiiki nke ọma site na kilns ọwara mita 80, ogologo kiln na oge ịgba égbè na-eme ka elu ahụ na-egbuke egbuke na-egbuke egbuke;nkwụsi ike thermal siri ike;nchekwa na microvave na efere efere;
WWS na-ewu ụlọ nyocha nke anyị, na-enye akụkọ nyocha maka batch ọ bụla. The siri ike zuru oke àgwà ọkọlọtọ na-eme nri abalị tent gafere US Proposition 65. The paints na decals bụ lead&cadmium free, mere na gara aga Euro nri aka nchekwa ule.
Ngwaahịa niile nwere nzọụkwụ na-egweri, nke nwere ike ichebe tebụl site na ncha.
Ọzọkwa, a na-eme stampụ azụ ọ bụla n'okpuru glaze, na-adịgide adịgide, ọ dịghị mkpa ka ị na-echegbu onwe gị na stampụ ahụ na-apụ n'anya.
●All anyị factory, nwere zuru set nke gburugburu ebe nchekwa akwụkwọ, jide n'aka na anyị factory ime nnukwu ihe gbasara nke puru omume nkịtị mmepụta mgbe izute ọjọọ ihu igwe.
● Anyị maara na oyi ọ bụla, n'ebe ugwu nke China, ọtụtụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe ga-akwụsị mmepụta n'ihi na ọtụtụ ihe kpatara ya, ma anyị wuru nnukwu ụlọ nkwakọba ihe na nke ọ bụla factory na a ga-edozi uka mmepụta n'ọdịnihu dị ka ndabere, ọbụna ma ọ bụrụ na anyị factory kwụsị, ma. anyị ka nwere ike ibu ibu na-ebubu nke ọma.
Asambodo bụ nkwa nke ikike nrụpụta ụlọ ọrụ na ịdị mma na nchekwa.Ọ bụghị naanị na-enyere ụlọ ọrụ anyị aka ịmepụta usoro dị mma ma dị irè, ma na-eme ka asọmpi nke ngwaahịa anyị dị na ahịa mba ụwa.Ngwaahịa ụlọ ọrụ anyị agafeela nchekwa nri, nchekwa efere efere, nchekwa oven microwave, nri na ọgwụ nchịkwa (FDA) asambodo na California CA 65 asambodo.Na gafere a ọnụ ọgụgụ nke esenidụt factory audits: BSCI, Sedex, EU (ADD17.6%) Anyị na-arụsi ọrụ ike iso dị iche iche nlezianya nwale usoro.Na-ahụ maka ngwaahịa anyị, kamakwa ọ na-ahụ maka ahụmahụ ndị ahịa. Anyị na-ekwe nkwa na usoro mmepụta whloe na-aga nke ọma na n'oge nnyefe.Anyị na-elekwasị anya na njikwa mma ma nwee ahụmahụ QC otu iji na-elekọta usoro mmepụta ọ bụla na ụlọ ọrụ mpaghara ọ bụla.Ya mere, a na-ekwe nkwa ịdị mma na ụbọchị nnyefe.